၂၀၁၇ အတွင်းမှာ Vehicle ပေါင်းတစ်သိန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Honda Malaysia! – AutoMyanmar
၂၀၁၇ အတွင်းမှာ Vehicle ပေါင်းတစ်သိန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Honda Malaysia!
Date: January 9, 2018 0
Honda Malaysia အနေနဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းမှာ Vehicle ပေါင်း ၁,၀၈၉၅၁၁ ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သိန်းကျော်ရောင်းချနိုင်မှုဟာ Honda Malaysia အနေနဲ့တော့ စတင်တည်ထောင်တဲ့ခုနှစ်၂၀၀၃ ကစပြီးကြည့်ရင် ပထမဉီးဆုံးအကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မှာတုန်းက ၉,၁၈၃၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ နဲ့ ၂၀၁၇ ရဲ့ရောင်းချနိုင်မှုမှတ်တမ်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Honda Malaysia Managing Director and Chief Executive Officer, Mr. Toichi Ishiyama said, “The year 2017 truly was remarkable for Honda Malaysia. At the beginning of 2017, we challenged ourselves withasales target of 100,000 units and in March 2017, we achievedahistorical milestone with the 600,000th unit (CKD) production within the span of 14 years since Honda Malaysia started in 2003. At the end of 2017, based on internal data our market share was at 19%, an increase of 3.2 points from 2016. For the first time ever, we surpassed the 100,000 units sales achievement withinacalendar year. We continue to maintain our No. 1 position for Non-National segment and No.2position in overall TIV of the automotive industry.”
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့၂၀၁၇ မှာရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ရလဒ်အပေါ် ပြောကြားခဲ့တဲ့ Mr. Toichi Ishiyama ရဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အနေနဲ့ ၂၀၁၇ နှစ်စမှာတည်းက Vehicle ပေါင်းတစ်သိန်းရောင်းချနိုင်ရမယ်လို့ စိန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မတ်လ မှာပဲသူတို့အနေနဲ့ ခြောက်သောင်းလောက်ရောင်းချပြီးနေပါပြီ။ စိန်ခေါ်မှုရဲ့ တစ်ဝက်ကျော် ပြီးမြှောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။ ၂၀၁၇ အပြီးမှာတော့ သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုထက်ပိုမိုများပြားတဲ့ Vehicle ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုကိုအပြတ်အသတ် အနိုင်ယူခဲ့တာကြောင့် Honda Malaysia Managing Director နဲ့ Chief Executive Officer ဖြစ်သူ Mr. Toichi Ishiyama အနေနဲ့လည်း တော်တော်ကျေနပ်အားရမိမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ ၂၀၁၆ နဲ့ယှဉ်ရင် ၂၀၁၇ မှာရောင်းအား ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့သလို ရှယ်ယာပိုင်းကလည်း ၃.၂ အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
Honda Malaysia အနေနဲ့ ၂၀၁၇ မှာရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Toichi Ishiyama ကိုယ်တိုင်ကလည်း အောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်သွားမယ့်အကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Honda Malaysia အတွက်တော့ ၂၀၁၇ အောင်မြင်မှုဟာ ၂၀၁၈ မှာအောင်မြင်မှုထပ်မံရရှိဖို့ အရှိန်အဟုန်တစ်ခုဖြစ်နေတော့မှာပါ။
#Honda #Malaysia in 2017 – 109,511 units sold, 19% increase from 2016, highest ever in company’s history https://t.co/iZ3cXvBtvB pic.twitter.com/9fAw2kP4b8
— Malaysia News (@malaysia_about) January 9, 2018
Honda, Year of sales